Izindlela Ezi-10 Zokuguqula Izivakashi Zisebenzisa I-Psychology | Martech Zone
Izindlela eziyi-10 Zokuguqula Izivakashi Zisebenzisa I-Psychology
NgoMsombuluko, Novemba 26, 2012 NgeSonto, Novemba 25, 2012 Douglas Karr
Amabhizinisi avame ukugxila kumadili wokushayela ukuthengisa okuningi. Ngicabanga ukuthi kuyiphutha. Hhayi ngoba ingasebenzi kepha ngoba kuthinta kuphela iphesenti lezithameli. Akuwona wonke umuntu onentshisekelo kwisaphulelo - abaningi bakhathazeke kakhulu ngokuthunyelwa ngesikhathi, ikhwalithi yomkhiqizo, idumela lebhizinisi, njll. Eqinisweni, ngingavuma ukubheja lokho ukwethemba imvamisa isu lokusebenzisa kangcono ukuguqulwa kune-a Isaphulelo.
Ukuguqulwa kaningi kungokwengqondo. Abathengi namabhizinisi abagcini ngokuthenga kakhulu, bavamise ukuthenga ngenxa yokwesaba, injabulo, ukuzanelisa, ukuzenzela isithombe, ububele… kunezizathu eziningi. Ngakho-ke ungangena kanjani kulawo mathuba?
Sonke sehlukile, kepha ezimweni eziningi ubuchopho bethu buthambekele ekuphenduleni ngendlela efanayo, futhi ukuqonda lobu buqili obusengqondweni yomuntu kungasiza ibhizinisi lakho lithole izindlela zokuqamba zokuhambisa abathengi abaningi ukuthi bathi “Yebo!” kumikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
I-Helpscout ikhiphe le infographic, Izindlela eziyi-10 zokuguqula amakhasimende amaningi (usebenzisa i-Psychology), futhi ungalanda i-ebook eya emininingwaneni eminingi.
Tags: Ukuguqulwaukuguqulwa kokuhlelwathwebulai-ebooki-ebook yamahhalaiyasizaPsychology
Ukubaluleka Kombhalo Oyimfihlo
Push Marketing Ukuthuthukiswa nge-Passbook
Dec 3, 2012 ngo-8: 43 PM
Ukuqonda izidingo namathemba akho ngicabanga ukuthi isithako esiyinhloko ekuzuzeni amakhasimende amaningi. Yebo, sihlukile sonke futhi njengosomabhizinisi kufanele sibheke lesi sici. Yenza amasu ahlukahlukene okwenza ithemba lakho lisho uYebo kuwe. Musa ukunamathela ngecebo elilodwa.
Siyabonga ngokwabelana :)